Anjani amasende ngaphakathi | Amadoda aseStylish
UAlicia tomero | 19/11/2021 20:18 | ZeMpilo
Amasende ngawo gondolas (idlala lobufazi) indoda. Zibekwe ngezantsi kwaye kumacala omabini epipi. Zibanjelwe endaweni yi scrotal sac emile okwesikhumba kunye nezinye ii layers ezimbalwa ukuyikhusela. Izicubu zezihlunu Ngomnye wemigangatho eya kwenza ukuba ingxowa eyenziwe ishwabene, ishiya amasende ekhululekile ngakumbi okanye eqokelelwe.
La madlala ngabavelisi bedlozi kunye neehomoni zesini kubandakanya testosterone. Ngaphandle kwamathandabuzo sithetha ngamalungu amadlala amakhulu kakhulu ngokomlinganiselo wenkqubo yokuzala yamadoda.
2 Ummandla weScrotal
3 Umgaqo-siseko wesende ngaphakathi
La malungu ibe nemilo embhoxo nobukhulu obuphakathi kweesentimitha ezine ukuya kwisibhozo ubude kunye neesentimitha ezimbini okanye ezintathu ububanzi. Barhangqwe yi ingxowa yesikhumba ebizwa ngokuba siscrotumIrhabaxa kakhulu kwaye iyalastiki, nto leyo eya kwenza ubushushu bayo buhlale busezantsi kunobo bonke umzimba, phakathi kwe-1 ukuya kwi-3 ° ngaphantsi. Inkangeleko yayo, ubunwele okanye umbala wayo kuya kuxhomekeka kakhulu ukusuka kwenye indoda ukuya kwenye kujongwe uhlanga okanye ubudala bayo.
Umntu, njengakwezinye izilwanyana ezanyisayo, banamasende abo zivela kwindawo yesisu, ukuya ngakwesokunene nasekhohlo kwe-lumbar spine kwaye ecaleni kwezintso. Ngexesha lokumitha kukamama, umntwana oyinkwenkwe uphuhlisa amasende kwindawo yesisu, kodwa ayawushiya lo mmandla ukuya. yehla kwindawo ye-groin, ukurhuqa kunye neengxowa ezijikelezayo kwaye ziphinde ziphinde zifake imilo yokugqibela.
Amasende zibomvu okanye luhlaza-mhlophe ngombala, konke kuya kuxhomekeka kwindlela olithoba ngayo igazi lakho. Kuqhelekile ukufumana ama-cysts amancinci amancinci kwiminyaka yobudala kwaye kungekhona ebuntwaneni, i-angiomas ebonakala ngathi inqwenela, i-varicose veins, nangona zonke ngaphandle kokubika naluphi na uhlobo lwengxaki enkulu.
Yindawo yonke egquma okanye ejikeleze amasende, zimile okwengxowa kwaye zinde. Ifumaneka ngaphantsi kwendawo ye-pubic, phambi kweperineum nasemva kwepipi. Lo mmandla wonke wohlulwe ngokwemigangatho emininzi:
Ulusu okanye isingxobo: yeyona ndawo intle kwaye ingaphandle, apho iinwele zikhula khona.
Dartos: Ingumaleko oqhubeka kwi-scrotum, nayo ibhityile kwaye yenziwe ngemicu yemisipha egudileyo.
Ingubo yeSeros okanye iFascia kaCooper: ine-anatomy efana neentsinga ezivela kwi-oblique muscle enkulu yesisu. Le micu irhuqwa ngamasende ukwenza ukwehla kwawo ukusuka kwisisu ukuya kwindawo yescrotal.
Ingubo enezihlunu: Yenziwa ngokwandiswa kwe-cremaster muscle, ehamba kunye nentambo ye-spermatic. Iintsinga zayo zivela kwimicu yezihlunu zezihlunu ezibanzi zesisu eziphinda zirhuqe ukuhla kwetyhalarha.
I-Fibrous Tunic: Imile njengengxowa kwaye ijikeleze indawo yentambo ye-spermatic kunye nesende.
Ingubo yangasese: Yinwebu ye-serous egoqa kwi-testicle kunye ne-epididymis
Ifoto ethathwe kwiWikipedia kunye neeSayithi zikaGoogle. I-Testis, i-epididymis kunye ne-spermatic funiculus yekati yasekhaya: 1. Inxalenye yangaphambili, 2. Ingxenye yangasemva, 3. Umda we-epididymis, 4. Umda ongaphandle, 5. I-testicular mesentery, 6 Epididymis, 7. Inethiwekhi yemithambo kunye nemithambo isende, 8. Vas deferens.
Umgaqo-siseko wesende ngaphakathi
I-testile kunye ne-epididymis zenziwe ngamalungu amabini ahluke kakhulu. Enye indawo sisigqubuthelo esinentsinga okanye i-albuginous ebizwa ngokuba yi 'testicular albuginea' kwaye yiyo egquma isende. Kwaye kukho i 'epididymal albuginea' ukugubungela i-epididymis.
I-albuginea yamatyhalarha Lilungu elinemicu kakhulu elijikeleze ityhalarha, inxalenye yalo yangaphandle yenziwe 'liphepha le-visceral' letunic yelungu lobufazi. Kwaye inxalenye yayo yangaphakathi ihambelana nezicubu ze-testicle ngokwayo.
Kwinxalenye yomda ongasemva ongaphezulu 'Umzimba ophezulu' apho uthungelwano lwemibhobho yamadlozi ebizwa ngokuba 'yiHaller's network' yenziwa khona. Uluhlu lwe-lamellae okanye i-septum luqala ukusuka kwelinye lamacandelo e-Highmore ayandayo ukuya kwi-periphery ye-testicle, iyahlula ibe yi-lobules.
Umsebenzi wesende ikakhulu kukuba dala kwaye ugcine amadlozi, Kodwa makhe sijonge ngakumbi ukuba yeyiphi enye into enokudala yona:
Ukuveliswa kwedlozi: ii-tubules zeseminiferous zenziwe, kwindawo engaphandle yodonga lwee-tubules, apho iiseli zentsholongwane. Ezi seli ziba ngumjikelo wokuqala kwaye emva koko zandiswa, ukuze ekugqibeleni zibe amadlozi aqolileyo. Ukusuka apha baya kudlula kwii-tubules ukuya kwi-epidymis, i-vas deferens kunye ne-seminal vesicles, apho baya kugcinwa khona ekugqibeleni.
Ukuveliswa kweTesttosterone: Ifumaneka kwizicubu ze-interstitial ezihlala ngexesha elifanayo phakathi kwee-tubules, indawo ecebileyo kwiiseli ze-Leydig ezijongene nokudala. testosterone. Le hormone iya kusasazwa kuwo wonke umzimba ngegazi ukuze ikwazi ukwenza imisebenzi yayo. Ukuba i-testosterone yehla ngengozi, mhlawumbi ngenxa yokuba amasende amancinci kakhulu ukususela ekuzalweni (i-testicular atrophy), okanye ngenxa yokuba i-testicular tissue ilahlekile, okanye ngenxa yokungena kwendoda yokuyeka ukuya esikhathini okanye ukusetyenziswa kakubi kwe-anabolic steroids.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » ZeMpilo » Anjani amasende ngaphakathi